Qaab dhismeedka Dhulka: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ku nool nahay meere aad u murugsan oo dhameystiran oo leh dhinacyo aan la tirin karin oo isku dheelitiraya oo nolosha u oggolaanaya. Qaab dhismeedka Dhulka Waxaa loo qaybiyaa laba qaybood aasaas ahaan. Marka hore gudaha dhulkeenna waa la falanqeynayaa. Waa muhiim in la ogaado waxa ku dhex jira Dhulka si loo fahmo dhinacyo badan oo dibadeed. Goor dambe, sidoo kale waa lagama maarmaan in la falanqeeyo dhammaan qaybaha dibedda si, guud ahaan, loo ogaado meeraha aan ku nool nahay.
Qoraalkan waxaan ku falanqeyn doonnaa oo aan si qoto dheer ugu ogaan doonnaa dhammaan dhismaha Dhulka. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
1 Qaab dhismeedka gudaha ee Dhulka
2 Qaab dhismeedka bannaanka ee Dhulka
2.1 Hawada sare
3 Qaab dhismeedka dhulku ma yahay mid isku mid ah ama isir ahaan?
Qaab dhismeedka gudaha ee Dhulka
Dhulku wuxuu soo bandhigayaa qaab dhismeed la sameeyay by lakabyo urursan halkaas oo dhammaan walxaha curiya ay isku beddelaan. Xaqiiqada ah inay ku kala baxaan lakabyo waxaan ogaan karnaa mahadnaqa dhaqdhaqaaqa mowjadaha dhul gariirka marka dhulgariir dhaco. Haddii aan ku falanqeyno meeraha gudaha ilaa dibedda, waxaan ilaalin karnaa lakabyada soo socda.
Udub -dhexaadku waa lakabka ugu hooseeya Dhulka halka xaddi badan oo bir ah iyo nikkel ayaa laga helaa. Qayb ahaan waa la shubay waana sababta keentay in Dhulku yeesho dhul magnet ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'endosphere'.
Qalabka ayaa dhalaalay sababo la xiriira heerkulka sare ee xudunta laga helo. Qaar ka mid ah howlaha gudaha ee Dunida ayaa ka muuqda dusha sare. Waxaan arki karnaa dhulgariirro, volcano ama barakicinta qaaradaha (plate tectonics).
Gogosha dhulku waxay ka sarreysaa xudunta waxayna ka kooban tahay inta badan silsilado. Waa lakab cufan marka loo eego gudaha dhulka oo ka cufan marka ay ku soo dhowaato dusha sare. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'mesosphere'.
Lakabkan balaaran ayaa dhacaya waxyaabo badan oo ifafaale gaarsiin ah. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa ah kuwa qaaradaha dhaqaajinaya. Qalabka kulul ee ka soo baxa xudunta ayaa kaca marka ay qabowdana dib ayey ugu noqdaan gudaha. Xilliyadan socodka qulqulka ee marada ayaa mas'uul ka ah dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic.
Waa lakabka ugu sarreeya ee dhulka gudihiisa. Waxaa sidoo kale loo yaqaan lithosphere. Waxay ka kooban tahay silsilado fudud, kaarboonat iyo oksaydh. Waxay ugu dhumuc weyn tahay aagga ay qaaradaha ku yaallaan oo ugu dhuuban tahay halka ay ku yaalliin badduhu. Sidaa darteed, waxay u qaybsan tahay qolof badeed iyo baddeed. Qolof kastaa waxay leedahay cufnaanteeda waxayna ka kooban tahay waxyaabo gaar ah.
Waa aag juquraafi ahaan firfircoon halkaasoo qaar badan oo ka mid ah geeddi-socodka gudaha lagu muujiyo. Tan waxaa u sabab ah heerkulka ka jira gudaha Dhulka. Waxa kale oo jira hawlo dibadeed sida nabaad guur, gaadiid iyo daadin. Nidaamyadani waxay u sabab yihiin tamarta qorraxda iyo xoogga culeyska.
Qaab dhismeedka bannaanka ee Dhulka
Qaybta sare ee Dhulka ayaa sidoo kale ka kooban dhowr lakab oo isku urursada dhammaan walxaha dhulka.
Waa setka aagga biyaha oo dhan ee ka jira dhulka dushiisa. Dhammaan badaha iyo badaha, harooyinka iyo wabiyada, biyaha dhulka hoostiisa iyo glaciers ayaa laga heli karaa. Biyaha hydrosphere-ka waxay ku jiraan is-dhaafsi joogto ah. Meeshu kuma sii jirto. Tan waxaa u sabab ah wareegga biyaha.
Kaliya badaha iyo badduhu waxay fadhiyaan saddex meelood saddex meelood oo dusha dhulka oo dhan, markaa muhiimaddooda heer meeraha ayaa weyn. Waa ku mahadsan tahay hydrosphere in meeraha uu leeyahay midab buluug ah oo lagu garto.
Tiro badan oo ah waxyaabaha la milmay ayaa laga helaa biyo dhexdooda waxaana lagu hoos galiyaa xoogag aad u tiro badan. Xoogagga wax ka qabta waxay la xiriiraan wareegga Dunida, soo jiidashada dayaxa iyo dabaysha. Sababtooda darteed, dhaqdhaqaaqa qulqulka biyaha sida mawjadaha badda, hirarka iyo hirarka ayaa dhaca. Dhaqdhaqaaqyadani waxay saameyn weyn ku leeyihiin heer caalami, maadaama ay saameynayaan noolaha. Cimilada waxaa sidoo kale saameeya mawjadaha badda oo leh saameyn sida El Niño ama La Niña.
Dhanka biyaha cusub ama kuwa qaaradaha, waxaan dhihi karnaa inay muhiimad weyn u leeyihiin howlaha meeraha. Tani waa sababta oo ah waxay ka kooban yihiin wakiilada ugu nugul ee dhulka dushiisa.
Jawiga Waa lakabka gaasaska ku wareegsan Dunida oo dhan waxayna muhiim u yihiin nolosha si ay u horumariyaan. Ogsijiin waa gaaska qaboojiyaha nolosha sidaan ognahay. Intaas waxaa sii dheer, gaasas badan ayaa caawiya kala sifeynta shucaaca qorraxda ee dilaaga u noqon kara noolaha iyo nidaamyada deegaanka.
Jawigu markiisa wuxuu u qaybsan yahay lakabyo kala duwan, mid walbana dherer, hawl iyo halabuur kala duwan.
Laga bilaabo meesha loo yaqaan 'troposphere', waa mid si toos ah ugu taal korka adag ee Dhulka. Aad ayey muhiim u tahay maxaa yeelay waa halka aan ku noolahay waana mida dhalisa dhacdooyinka saadaasha hawada sida roobka.
Qaybta sare waa lakabka xiga ee ku fidsan kor kor ku xusan oo ku saabsan 10 km of troposphere ah. Lakabkaan waa ilaalinta shucaaca UV. Waa lakabka ozone.
Meesha sare waxay la socotaa heer sare sidoo kale waxaa ku jira xoogaa ozone.
Hawada waxaa loogu yeeraa sidan maxaa yeelay, saameynta shucaaca qoraxda awgood, heerkulka wuxuu dhaafi karaa 1500 ° C. Halkaas waxa ku yaal aag loo yaqaan ionosphere, kaas oo atamyo badani ku waayaan elektaroonno oo ay ku jiraan qaab ion, soona daayaan tamar ka kooban nalalka woqooyi.
Goobta maaha lakab dhulka laftiisa ah, laakiin waa dejinta dhammaan nidaamyada deegaanka ee jira. Dhammaan noolaha ku nool dhulkeenna waxay ka kooban yihiin biosphere. Sidaa darteed, biosphere waa qayb ka mid ah qolofka dhulka, laakiin sidoo kale hydrosphere iyo jawiga.
Astaamaha biosphere waa waxa loogu yeero kaladuwanaanta. Waxay ku saabsan tahay dhammaan noocyada kala duwan ee noolaha iyo qaababka nolosha ee laga helo meeraha. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira xiriir isu-dheelitiran oo u dhexeeya dhammaan qaybaha biosphere-ka oo mas'uul ka ah inay wax walba si sax ah u shaqeeyaan.
Qaab dhismeedka dhulku ma yahay mid isku mid ah ama isir ahaan?
Thanks to hababka waxbarasho ee kala duwan, waxaa la ogsoon yahay in gudaha dhulkeenna uu yahay mid kaladuwan. Waxaa lagu qaabeeyey aagagga urursan ee leh sifooyin kala duwan. Hababka daraasaddu waa sida soo socota:
Hababka tooska ah: Kuwani waa kuwa ka kooban kormeerida barashada astaamaha iyo qaab dhismeedka dhagaxyada sameeya dusha sare ee dhulka. Dhammaan dhagaxyada si toos ah ayaa looga taaban karaa dusha sare si ay u awoodaan inay ogaadaan dhammaan sifooyinkooda. Tan awgeed, shaybaarada waxaa lagu qiyaasaa dhammaan astaamaha dhagxaanta ka samaysan dhulka. Dhibaatadu waxay tahay in daraasaddan tooska ah lagu fulin karo oo keliya illaa qoto dheer 15 kilomitir.
Hababka aan tooska ahayn waa kuwa u adeega fasiraadda xogta si looga soo saaro waxa gudaha Dhulka u eg yahay. In kasta oo aanaan toos u heli karin, haddana waan ogaan karnaa gudaha iyadoo ay ugu wacan tahay daraasadda iyo falanqaynta astaamaha qaarkood sida cufnaanta, magnetism, cuf isjiidadka iyo hirarka dhul gariirka. Xitaa iyada oo la falanqeynayo meteorites-ka waxyaabaha ka kooban dhulka ee gudaha ayaa sidoo kale la soo saari karaa.
Hababka ugu waaweyn ee aan tooska ahayn ee jira si loo sameeyo qaab-dhismeedka gudaha ee dhulka waxaa ka mid ah hirarka dhul-gariirka. Daraasada xawaaraha hirarka iyo sida ay u socdaan waxay noo saamaxday inaan ogaano gudaha dhulka, jir ahaan iyo dhisme ahaanba. Waana taas dabeecadda mowjadahaas ayaa is beddelaya iyadoo ku xiran guryaha iyo dabeecadda dhagxaanta way marayaan. Marka uu jiro aag isbeddel oo u dhexeeya qalabka, waxaa loo yaqaan 'discontinuity'.
Aqoontaas oo dhan, waxay raacaysaa in gudaha Dhulka uu yahay mid kaladuwan oo lagu qaabeeyey aagag isku urursan oo leh astaamo kala duwan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto qaab dhismeedka Dhulka iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Qaab dhismeedka Dhulka
Maxaa macno leh dijo
bogga aad ayuu ufiican yahay
Ku jawaab qleimporta
Aad ayaan ugu fiicanahay bogga waxbadan ayaan ka bartay mowduucan
Jawaab ku bixi Marcelo Daniel Salcedo Guerra
Daabacaad wanaagsan, aad u dhameystiran.
Jawaab José Reyes
Hirarka cufis jiifka